Ndeapi mabhuku akanak kwazvo ekuverenga zororo iri? | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhetembo
Nekusvika kwaNyamavhuvhu, kushanya munyika medu kwakakwira uye, navo, mabhuku akanaka ekuverenga pasi pemuraira uye pamberi pegungwa rebhuruu rinokurudzira. Izvi akanakisa mabhuku mabhuku ekuverenga zororo rino ivo vanova akakurudzira mazano ekuzorora uye kuenda kune dzimwe nzvimbo kuburikidza nemapeji ayo.
1 Nyaya yaMhandara naMargaret Atwood
2 Mhuri Yangu uye Dzimwe Mhuka, naGerald Durrell
3 Kuparara kwaStephanie Mailer, naJoël Dicker
4 Dzimwe nzira dzekushandisa muromo wako, naRupi Kaur
5 Ocean Africa, naXavier Aldekoa
6 Vanasikana vaCaptain, naMaría Dueñas
7 Nyaya kuti unzwisise nyika, naEloy Moreno
8 Wuthering Heights, naEmily Brontë
9 Kudanwa kwedzinza, naMario Vargas Llosa
Mushure mezvakabuda zvechipiri (uye zvakanyanyisa) mwaka weThe Handmaid's Tale, tarisa mune zvinyorwa zvinyorwa zvechimwe zvacho akanakisa akateedzana enguva inogona kukurudzirwa zvakanyanya. Iyo Hulu nhepfenyuro yakafuridzirwa neanozivikanwa mazita nemunyori weCanada Margaret Atwood rakaburitswa muna 1985 uye rakanangana nehupenyu mu Gireadhi, hutongi hwehutongi uko vakadzi vashoma vakaorera vekare system vanoshandiswa sevaranda vepabonde. Kunyangwe bhuku racho richingofukidza chete mwaka wekutanga wenyaya dzakateedzana, kufamba mumapeji aro kunogona kuita sarudzo yakanakisa kana zvasvika pakunzwisisa kugona kwechiitiko cheterevhizheni kunyange zvirinani.
Ungada here kuverenga Nyaya yaMhandara?
Mhuri Yangu uye Dzimwe Mhuka, naGerald Durrell
Zoologist uye naturalist, Durrell akatendeukira kuzvinyorwa kuti atipe isu neakakurumbira «corfu trilogy«, Yei izvi Mhuri yangu nedzimwe mhuka Iyo inozivikanwa uye inonakidza yezvose. Gara pachitsuwa cheGreek cheCorfu, apo munyori aimbopedza zhizha gore rega rega, bhuku iri ongororo yemhuri yake yakapenga kuburikidza nemudiki pavana vake, mukomana anonamata zvipfuyo zvake uye anozviratidza sevanhu vane hunhu hwakaenzana mukati me shanda. Iri rakapfava, rakareruka uye rinozorodza bhuku rekuverenga pane lounger mukati memavhiki ano ezororo.
Kuparara kwaStephanie Mailer, naJoël Dicker
Imwe ye izvozvi mabhuku anotengesa zvakanyanya Ndiyo razvino runyorwa naDicker, anokunda mibairo yakadai seGoncourt des Lycéens kana iyo Mubayiro Mukuru weNovel yeFrench Academy. Inonakidza zvikuru inotanga muna 1994, apo meya nemhuri yake vakapondwa pamwe chete nemukadzi. Mapurisa maviri eNew York, Jesse Rosenberg naDerek Scott, vari kuferefeta nyaya iyi, kunyangwe mutori wenhau anonzi Stephanie Mailer aburitsa makore makumi maviri gare gare kuti vaferefesi vese vakarasika semhondi. Mazuva apfuura, mukadzi wechidiki anonyangarika. Zvinofadza.
Kutsakatika kwaStephanie Maileriyo ndeimwe remabhuku akanakisa ekuverenga zororo iri.
Dzimwe nzira dzekushandisa muromo wako, naRupi Kaur
Kumirira chii bhuku rechipiri raRupi Kaur, Zuva nemaruva aro, ichaburitswa muSpanish pakupera kwaNyamavhuvhu gore rino, mazororo anogona kuve mukana wakanakisa wekutsvaga kuburitswa kwayo kwekutanga: Dzimwe nzira dzekushandisa muromo wako. Akazvarwa pa Instagram, iyi muunganidzwa wenhetembo inova rwendo ipfupi asi rwakadzama kupinda mumanzwiro emunyori wayo, mudetembi wekuCanada wekuIndia mavambo anorondedzera zvaakaona nezvechikadzi, mhuri kana kutama nekunzwa kwakanyanya. Chirema uye chakanakira kuti ubve pasocial media kwemaawa mashoma.
Ocean Africa, naXavier Aldekoa
Kufamba kunokukoka iwe kuti ufambe, uye kunyangwe kana iwe uri pachena kuti iwe uri munzvimbo yako yezororo ya2018, unogona kugara uchizvibvumira kushanyira dzimwe nzvimbo pasi pano usingabvi pamhenderekedzo. Imwe yeakanakisa mazano nderiri bhuku raXavier Aldekoa, mutori wenhau uyo kweanopfuura makore gumi yakafamba nyika yese yeAfrica kutsanangura kuoma uye mufaro wayo, misiyano yeiyo "gungwa" hombe uko kwatinoona kutaurirana kweroora remudiki weSouth Africa kana nehondo yenzara yevagari veSomalia, mienzaniso miviri yeicho chaicho chenzvimbo inonakidza sezvazviri hanya.
Kufamba kuburikidza Africa africa.
Vanasikana vaCaptain, naMaría Dueñas
Iyo yekupedzisira bhuku naMaría Dueñas, Vanasikana vaCaptain, rave rekupedzisira uye rakanyanya inobudirira kuburitswa kweiyo Planeta imba yekutsikisa. Inoverengeka inonakidza yakamisikidzwa muNew York muna 1936, apo kufa kwemuridzi weimba yekuSpanish yekudya, Emilio Arenas, achisundira vanasikana vake vakashinga Victoria, Mona naLuz kuti vafambe nenzira yeguta rezvivakwa rakasiyana zvakanyanya neSpain yazvino .
Nyaya kuti unzwisise nyika, naEloy Moreno
Chokwadi vazhinji venyu muri kufamba nevana pazororo iri, inopfuura chikonzero chakaringana chekukurudzira izviNyaya dzekunzwisisa nyika rakanyorwa naEloy Moreno. Kupfuurisa 22 mapepa edhisheni rakaburitswa kumashure kwake, iyi seti ye 38 nyaya Zvichaita kuti vana vadiki vafunge nezve zvivakwa sezviri nyore sezvavari kwese. Yakanakira vana vari pakati pemakore mashanu neatanhatu ekuberekwa, bhuku iri zvakare rinoita kopi yakakwana kune vakuru vanotarisa kuti vadzokere pahudiki uye avo, kunyanya, vanofarira kutaurira vana vavo nyaya pane kuvaratidza mavhidhiyo paYouTube. Zvakakodzera uye zvinokurudzirwa zvikuru.
Muzhizha kupi Makore mazana maviri kubvira pakazvarwa Emily Brontë, achipenengura mune rake rakakura basa, Wuthering Heights, zvinoita sekunge isu ndiyo yakanakisa yekuvaraidza. Akagara mumaruwa akasarudzika eYorkshire, inoverengeka inotaura nezverudo rune dutu pakati paHeathcliff, jaya rakagamuchirwa neveEarnshaws, iro rakaburitsa hunhu husina kutsarukana uye hwekutsiva, naCatherine Earnshaw, mwanasikana weEarnshaw. Yakagadzirirwa pasi pechimiro cheinovhurika yenguva iri muchimiro che matryoshka zvinyorwa, Zvikomo zveWuthering Icho chimwe chei mabasa makuru enguva dzese zvisinei nekusanzwisisa kwayakatambura panguva yekuburitswa kwayo muna 1847.
Bhuku razvino raVargas Llosa, rakaburitswa munaKurume wapfuura, rinopinda mupfungwa dzeNobel Prize anokunda kuti atitaurire nezvese zvinhu, zviitiko uye zvinokanganisa izvo zvakaumba zvakasarudzika zvemunyori wePataleón neVashanyi. Vanyori vakaita José Ortega y Gasset, Karl Popper kana Isaya Berlin tsvedza mukati merwendo rwuno rwega kuburikidza nepfungwa yemunyori wePeruvia -Spanish akaodzwa mwoyo nenjodzi dzezvematongerwo enyika nevezvematongerwo enyika mukondinendi yake yekutanga.
Ungada here kuverenga Kudanwa kwerudzi?
Ndeapi eaya mabhuku okuverenga zororo iri aungasarudza? Une imwe here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku akanakisa ekuverenga zororo iri